Axmed Madoobe oo Dhoobley ka wada kulamo ka dhan ah DF – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo xalay ku hoyday degmada Dhoobleey ee gobolka Jubbada Hoose ayaa degmadaas uu kulmo kula leh saraakiisha ciidamada Jubbaland ee ku sugan Dhoobley.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa sarakiisha kala hadlaya sidii Al-Shabaab looga difaaci lahaa deegaanada hoos taga Dhoobley iyo waxa laga yeelayo ciidamada dowladda federaalka ee iyaguna ku sii siqaya deegaano badan oo horay uu uga arimi jiray maamulka Jubbaland.
Axmed Madoobe ayaa saraakiisha amray la bilaabo howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo gacanta ku haya degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada Jubbooyinka ee uu ka arrimiyo maamulkan.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa maanta kulmo la qaadan doona qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Dhoobley ee gobolkas Jubbada Hoose.
Axmed Madoobe ayaa gelinkii dambe ee shalay Dhoobley ku gaaray diyaarad militeri oo ka qaaday magaalada Kismaayo, taas oo ay leyihiin ciidamada cirka ee dowladda Kenya, kuwaas oo qeyb ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM.
Dowladda Itoobiya oo war ka soo saartay raali-gelintii Farmaajo ee Somaliland